Hypoid bevel gearmotor yekutengesa Hypoid gear motor kugadzira
Hypoid bevel gearmotor inogadzira mutengo wekutengesa
Hypoid gear mota yekutengesa
Isu tiri nyanzvi yekugadzira pane hypoid spiral bevel gear motors.
Hypoid gear mota yekugadzira
Hypoid giya mota inogadzira ine yakaderera ruzha uye kugona kwakanyanya
Hypoid gearbox dhizaini
Hypoid Gearbox kubva kuSogears inopa iyo yekupedzisira mukuita uye mutoro wekubatanidza zviitiko zvakasiyana kune yakakwirira kutenderera servo inotungamirwa mafomu.
Hypoid gear drive inopa
Isu tine yekutanga kirasi nzira yekucheka pane hypoid gear yekugadzira.
Hypoid bevel gearmotor inotengeswa
Right kona Hypoid bevel gearmotor Kazhinji inoshandiswa mumashandisirwo emota
Tsika Spiral Bevel Magiya
Isu tinogadzira hypoid giya nemabhuru, chinonyanya kujairika chimiro chekumhanya-mhanya izvo zvinoda torque yakawanda.
Kuziva mhango shaft inokwira kune Hypoid giya yakaiswa nemagetsi mota
Mutengesi Hypoid bevel gear zvigadzirwa
Hypoid bevel gearbox motors kana hypoid giya inoderedza, chizvarwa chitsva chezvinhu zvinoshanda zvakasununguka zvakagadzirwa nekambani yedu, iyo inosanganisa tekinoroji yepamberi mukati nekunze, Kwakanyanya kushanda, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
aluminium alloy housing uye 20CrMnTi yegiya mukati. kuoma kwezino pamusoro ndeye 56-62HRC uye ukobvu hwenzvimbo yakatakurwa inochengetwa 0.3-0.5mm mushure mekukuya kwakanaka. 120W, 180W, 250W, 370W, 550W, 750W, 1100W, 1500W Helical-Hypoid Gear mota, Nyowani Style Model Helical-Hypoid Yakagadzirirwa mota, Standard Flange Input Hypoid mota.
Yakajairwa Flange Input Hypoid mota AC gearmotor.
Hypoid Kuendeswa kweGebox bhokisi rekushandisa rinoshandiswa zvakanyanya mukati
Ceramic Indasitiri, Girazi Indasitiri, Chikafu Maindasitiri, Metallurgy Maindasitiri, Doro & Kunwa Maindasitiri, Kudhinda uye kudhaya Maindasitiri, Textile Viwanda, Warehouse Logoistics Indasitiri, Wood anoshanda Mashini, kwezvakatipoteredza kuchengetedza midziyo Indasitiri, Leather Viwanda, Chemishonga Indasitiri
Yedu masevhisi e Hypoid gear motor & gearbox
4.1.Tinopa 12 mwedzi Waranti.
4.2. Isu tine zviuru zvegearbox bhokisi remagetsi. Kubva Kupinda Simba 0.06KW kuenda ku200KW, Ratio 1.3-289.74, Kubuda nekukurumidza 0-1095rpm uye Kubuda torque 1.4-62800Nm. Vanogona kusangana nezvako zvese zvakasiyana zvinodiwa maindasitiri akasiyana.
4.3. Isu tinopa E-catalog kana Pepa katalog, kuitira kuti iwe unogona kusarudza muenzaniso nyore zvichienderana nezvaunoda
4.4.Iwe unogamuchirwa kushanyira fekitori yedu kuti itarise zvigadzirwa zvedu, tinogona kukubatsira kubhuka hotera kana tikiti.
Chii chiri kugadziriswa kweiyo Hypoid gearboxes?
1. Zvinhu Zvikuru
(1) Dzimba: die-cast aluminium alloy (chimiro saizi 27 kusvika 57)
(2) Giya vhiri: 20CrMnTiH1 carbonizing & kudzima kupisa kurapwa inoita kuti kuomarara kwemidziyo pamusoro kuve kusvika 56-62 HRC, uye kuchengetwa carburization materu ukobvu pakati pe0.3 ne0.5mm mushure mekukuya chaiko.
2. Pamusoro pePendi
Aluminium alloy dzimba:
(1) Shot kuputika uye chaiyo antiseptic kurapwa pane aluminium alloy pamusoro.
(2) Mushure mekupora, pfiza RAL9022 sirivheri chena pendi.
Teerera paunenge uchiisa Hypoid gearboxes:
1. Usati wasangana Hypoid giya mota uye meishini michina, tarisa kuti kana kutenderera kutenderera kweinobuditsa shaft yeHypoid gear mota iri chaiyo;
2. Usati wasangana Hypoid giya mota uye yepamberi mover uye zvishandiso, tarisa maitiro ekutsauka kweimwe neimwe shaft dhayamita, aperture, kiyi uye keyway yekudzivirira kuita kweHypoid gear mota;
3. Hypoid giya mota inofanirwa kuiswa pane mechaniki zvishandiso kuti unzvenga kusununguka uye kudedera;
4. Regedza kufumura Hypoid gear mota kusvika kune zuva uye nharaunda yakashata zvakanyanya sezvinobvira;
5. Kana iyo nguva yekuchengetedza yeHypoid gear mota iri 4-6 mwedzi, tarisa kuti ishe yekusimbisa yakanyura zvakakwana mumafuta ekuzora. Iyo miromo yekuisa chisimbiso pamuromo inogona kurasikirwa nehuviri hwayo. Sezvo yakakodzera elasticity iri mamiriro anodiwa kuti basa rechiratidzo cheoiri, zvinokurudzirwa kutsiva mafuta chisimbiso. ;
6. Nhengo dzese dzerabha uye maburi anopaza haagoni kugara pendi;
7. Kana muhari shaft uye shaft yakasimba yeHypoid gear mota ichibatanidzwa neumwe neumwe, chikamu chekuzora chezveshuwa chinofanira kunge chakabatanidzwa nemafuta ekuzora kuti usabatwe;
8. Chikamu chemafuta chinofanira kuongororwa panguva yekushandiswa (seyakadai yemafuta girazi gomba kana yakazaruka mafuta plug, diki modhi haigone);
9. Paunenge uchishandisa iyo itsva Hypoid gear mota, haigoni kutanga pakazara mutoro, uye haifanire kuwedzera mutoro;
10. Paunenge uchishandisa mhando dzakasiyana dzemotokari zvakananga-dzakabatana Hypoid gear motors, kana huremu hwemotokari hwakanyanya, michina yekutsigira inofanira kupihwa;
11. Ita shuwa kuti pane yakanaka yekuvharira nharaunda pedyo ne mota fan kuti isakanganise kupisa kupukunyuka maitiro;
12. Iyo inowanzoshanda nzvimbo tembiricha ye Hypoid gear mota iri -5 ° C kusvika 40 ° C. Kana zvisiri mukati meiyi renji, ndapota taura nevashandi vedu vehunyanzvi.
Hypoid magiya emabhokisi anogona kuiswa mumapoka ebheri mabhokisi.
Inodhura-inoshanda kurudyi kona Hypoid Motor gearbox
Iyo compact uye robust dhizaini ine kukwikwidza mutengo.
Yakasiyana siyana sarudzo yezvibodzwa.
Kuisa zviri nyore uye kune kushanda kwakanaka neiyo Rated yakabuda torque 25 kusvika 720 Nm.
Tsvaga pano zvakachipa mutengo wenyaya yekutengesa kambani Hypoid Gear mota. Tora ruzivo rwevatengesi, vagadziri, vekunze, vatengesi ve Hypoid Magiya yekutenga muChina.
Ndapota inzwa wakasununguka kubvunza isu